Fahalemena sy ny viriosy: ny faran'ny lafiny marotoa - fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
[1 Novambra 2021] AHDR dia mitady Mpiandraikitra ny Tetikasa Fanabeazana - Fanabeazana Tantara (Cyprus) Jobs
[1 Novambra 2021] Natomboka ny Fanentanana Shine Africa: fambolena hazo Moringa sy fampiroboroboana ny fanabeazana momba ny fandriampahalemana Vaovao sy hevi-dehibe
Fahalemena sy ny viriosy: ny faran'ny hafa amin'ny marotoa
Enga anie 5, 2020 Vaovao sy hevi-dehibe 0
Fampidirana an'ny editor: izany Fifandraisana Corona amin'ny faharefoana dia manolotra fitaovana foto-kevitra vitsivitsy ho an'ny famotopotorana natao hitarika ny fizotran'ny "fanarenana" aorian'ny areti-mandringana mankany amin'ny tontolo nohavaozina, satria mamporisika ny fifantohana amin'ny fanontaniana toy ny hoe, "Iza no nijaly tamin'ny inona no manimba izany antony manokana izany? Inona no azontsika ianarana momba ny fahalemena amin'ity areti-mandringana ity? Inona no fiheverana ny fahalemena toa mitarika amin'ny famolavolana drafitra fanarenana? "
Ny ratsy indrindra amin'izany
"Ny olona any amin'ny farany ambany amin'ny tohatra no tena voa mafy amin'izany."
Izany, na teny nanatanterahana izany, dia ampahany tamin'ny resaka rehetra momba ny areti-mandringana COVID 19, tao amin'ny resadresaka sy mailaka "fizahana" marobe niaraka tamin'ny namana eran'izao tontolo izao sy manerana an'i Etazonia. Hita miharihary fa ireo izay kely indrindra dia nijaly indrindra tamin'ny lafiny rehetra: tratry ny aretina, isan'ny maty, fatiantoka ara-toekarena, indrindra eo amin'ireo mpandray karama isan'ora, tsy fahampian'ny serivisy fanampiana ara-pahasalamana, ary ireo tsy fetezana marobe amin'ireo izay mora tohin'ny toe-karena. rafitra, amin'ny toeran'ny fifindra-monina, amin'ny maha mpikambana ao amin'ny vitsy an'isa na vehivavy. Anisan'ireo miatrika fahalemena ara-drafitra tsy tapaka izy ireo, eo ambanin'ny toe-karena ara-toekarena sy politika rehetra, ary ireo endrika hafa amin'ny toe-javatra hafa misy ny fihenjanana ara-tsosialy. Ankehitriny, rehefa tonga ny areti-mandringana, dia nahatsapa ny fiatraikan'ny loza mahatsiravina indrindra nanjo ny rehetra izy ireo rehefa niparitaka nanerana an'izao tontolo izao ny viriosy.
Moa ve io fanekena vaovao ny fahalemena io hanaitra ny firenena rehetra amin'ny farany ny filàna sy ny fahafaha-mieritreritra vaovao momba ny fiarahamonina manerantany aorian'ny fihanaky ny otrikaretina izay miezaka manala ny fahalemen'ny firafitra?
Ny areti-mandringana dia nanala tanteraka ny zava-misy fa ireo eo amin'ny farany ambany amin'ny tohatra ara-tsosialy sy ara-toekarena dia miaina anaty tsy fanjarian-tsakafo tsy tapaka sy rafitra izay mahatonga azy ireo hiharan'ny lozam-pifamoivoizana amin'ny loza rehetra. Ekena izao, na dia ny haino aman-jery mahazatra sy ny tarehimarika ho an'ny daholobe aza, dia nisy jiro lava mandanjalanja nampamirapiratra ny zava-misy momba ny fahalemena maharitra, ny fomba niainany, ary ny zavatra mety hatao momba izany. izany Fifandraisana Corona, ary ireo lahatsoratra teo aloha, dia maneho ny fomba mampitombo ny tsy fandriampahalemana sy ny fanilikilihana ataon'ny olona mora tohina indrindra. Hitanay tany Etazonia fa nanjary mazava sy naharary nandritra ny Rivo-doza Katrina izany, rehefa rava teo imasonay ny fiarahamonina amerikana afrikanina New Orleans noho ny tsy fisian'ny fanampiana vonjy maika sy fanarenana. Ireo maso ireo, na izany aza, tsy ela dia nivily lalana tamin'io faharavana io, niverina tamin'ny "asa toy ny mahazatra", fanarenana tsy misy fanavaozana ny fanavakavaham-bolon-koditra. Ary any Etazonia indray, ny amerikanina afrikanina dia mijaly indrindra amin'ny COVID miaraka amin'ny aretina marobe indrindra sy ny taha maty indrindra. Moa ve io fanekena vaovao ny fahalemena io hanaitra ny firenena rehetra amin'ny farany ny filàna sy ny fahafaha-mieritreritra vaovao momba ny fiarahamonina manerantany aorian'ny fihanaky ny otrikaretina izay miezaka manala ny fahalemen'ny firafitra? Ny voalohany amin'ny Corona Connections, “Ny olan'ny fantsika”Niezaka ny handrisika ny hisaintsainana ny valiny nataon'ny miaramila tamin'ny ady amin'ny areti-mifindra, ity dia ezaka iray hampirisihana ny famotopotorana mitovy amin'izany amin'ny drafitry ny" fanarenana "sy ny anjara asany amin'ny fananganana tontolo nohavaozina.
Fahitana mazava, toro lalana momba ny fanabeazana momba ny fandriam-pahalemana; Ny fanavahana ho dikan'ny mazava
Anisan'ny tanjon'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana ny fampivelarana ny fahafaha-manao famotopotorana ho fitsikerana ny marimaritra iraisana momba ny raharaham-pirenena, ny resaka politika manoloana ny politika izay mampisy fandriampahalemana sy fahamarinana. Ny fahazavan'ny serasera amin'ny ankapobeny, ary indrindra ny mazava momba izay tena anontaniantsika, ny hevitra ifampizarantsika ny fisaintsainantsika ara-politika dia tafiditra ao amin'ny pedagogy antsika. Ao anatin'ny ezaka hanamorana ny fisainana vaovao momba ny fampianarana momba ny fandriam-pahalemana izay tian'i Corona Connections hamporisihina, dia manome sosokevitra vitsivitsy ato aho momba ny fahitako azy ho endrika marefo, izay samy mila mitaky izany miavaka - raha misy ifandraisany amin'ny tena - paikady fanarenana sy fanavaozana atao amin'ny "famerenana amin'ny laoniny", ankehitriny izay olana lehibe amin'ny adihevitra COVID. Raha tanjona ho an'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana ny fianarana ny fahamarinana, tsy tokony ny fangatahana ifotony izay tadiavintsika hamotopototra ny drafitra fanarenana dia ny hoe: "Iza no nijaly izay vokany nateraky ny antony manokana? Inona no azontsika ianarana momba ny fahalemena sy ny antony avy amin'ity areti-mandringana ity? Inona ny fiheverana ny faharefoana izay toa mitarika ny drafitra fanarenana?
Raha tanjona ho an'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana ny fianarana ny fahamarinana, tsy tokony ny fangatahana ifotony izay tadiavintsika hamotopototra ny drafitra fanarenana dia ny hoe: "Iza no nijaly izay vokany nateraky ny antony manokana? Inona no azontsika ianarana momba ny fahalemena sy ny antony avy amin'ity areti-mandringana ity? Inona ny fiheverana ny faharefoana izay toa mitarika ny drafitra fanarenana?
Ny zava-manan'aina rehetra dia marefo. Noho izany, mifanaraka amin'ny fanohanako ny eritreritra ekolojika ho mety kokoa noho ny soritr'aretina eritreritra politika hamahana ny olan'ny fandriam-pahalemana, dia manamafy aho fa ny faharefoana dia tokony ho olana lehibe amin'ny fanabeazana ny fandriampahalemana. Satria ny fahasamihafana dia lafiny iray lehibe amin'ny ekolojia, dia tokony homarihina fa ny faharefoana rehetra dia tsy miseho amin'ny fomba mitovy. Ity Corona Connection ity dia mifantoka amin'ny fahasamihafana niainana tamin'ny fahalemena ara-tsosialy sy toekarena hita miharihary ankehitriny. Ny fahalemena, amin'ny maha-fotokevitra fototra azy, dia tiako holazaina fa atahorana, apetraka ny risika. Tsy ny loza ateraky ny fiainana rehetra, na ny risika an-tsitrapo, ohatra, no noraisin'ny Plowshares mpikatroka anti-nokleary, ny ifantohan'ny fifandraisana roa teo aloha. Tsy voafidy ny marefo ara-tsosialy sy ara-toekarena, ary mahalana no mahatonga ny tena marefo. Amin'ny maha-zava-niainan'ny olombelona dia ny tsy fisian'ny fitaovana hanoherana ny fahavoazan'ny fahoriana; hananana faharetana voafetra na hery "miverina" manoloana ny krizy sy ny voina. Ara-tantara, ny hoe anisan'ireo marefo dia nidika fijaliana lehibe indrindra rehefa sendra krizy sy loza. Amin'ny maha mpanabe fandriam-pahalemana antsika dia nanoratra sy niresaka momba ny fahalemena ara-tsosialy sy toekarena izahay ho toy ny singa iray amin'ny olana ara-pilaminana, saingy mbola tsy nanazava sy namantatra izany ampy izahay mba hananganana fanontaniana mifanaraka amin'ny fianarana takiana handresena azy. Rehefa misaintsaina ny fahalemena aho, dia mahita fomba isan-karazany izay miseho sy mifanerasera amin'ny lamina manerantany. Tsapako ny antony fototry ny fahalemena apetraka amin'ny fandeferana amin'ny ankapobeny ny tsy fitoviana, nipoitra avy amin'ny finoana marobe fa ny tsy fitoviana, toy ny olan'ny olombelona hafa, dia fanomezana fiainana fotsiny. Raha ny marimarina kokoa eto dia hitako ihany koa ny fiovana sasany amin'ny antony mahatonga ny endrika marefo izay inoako fa tokony hodinihina amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny vokany sy ny fandresena ny antony. Ny fanombantombanana toy izany dia tokony, hoy aho, mitady fomba hanomezana ireo marefo fitaovana hampihenana farafaharatsiny farafaharatsiny mba hisorohana ny risika, ary ny fotoana ahafahana mampivelatra ny faharetana.
Amin'ny maha mpanabe fandriam-pahalemana antsika dia nanoratra sy niresaka momba ny faharefoana ara-tsosialy sy toekarena izahay ho toy ny singa iray amin'ny olana ara-pilaminana, saingy mbola tsy nanazava sy namantatra izany ampy izahay hananganana fanontaniana mifanaraka amin'ny fianarana takiana handresena azy.
Miaraka amin'ny fampihenana ny risika sy ny fitomboan'ny faharetana amin'ny tanjon'ity fanadihadihana fianarana ity, dia naka endrika endrika faharefoana telo aho izay azontsika atao mba hanavahana ny drafitra ho an'ny "fanarenana" aorian'ny areti-mandoza sy ny fitoviana ary hiditra amin'ny fisainana vaovao ho an'ny tontolo nohavaozina. Ho fanampin'ireo endrika ankapobeny apetraka eto, dia mitazona ny finoana aho fa ao anatiny, ary angamba, ankoatr'ireo endriny ireo, dia misy fiovana hafa azo ambara sy heverina mba hanazavana bebe kokoa ary hamaritana mazava kokoa ny fahalemena sy ireo vahaolana mahomby kokoa. Mamporisika ireo mpanabe fandriam-pahalemana aho mba hitady sy hanampy endrika toy izany amin'ny fanadihadiana.
Ireo telo izay arosoko izao, amin'ny resaka antony mahatonga azy ireo sy ny fomba hiainany; ny "maninona" sy ny "inona" amin'ny fahalemena apetraka dia: rafitra / rafitra, fepetra / fitaovana ary toe-javatra / fizarana. Na dia miavaka aza izy telo dia tsy misaraka. Toy ny zavatra rehetra eo amin'ny rafitra manerantany, dia mifamatotra izy ireo ary matetika miasa miaraka amin'ny fampitomboana ny enta-mavesatry ny marefo. Ny fanavahana eto, toy ny tao amin'ny Fifandraisana amin'ny COVID sy ny fiovan'ny toetrandro, dia natao ho tombontsoan'ny drafitra fomba fanarenana mifandraika sy mahomby kokoa ao anatin'ny fotoana fohy, ary fanavaozana azo atao sy azo ampiharina amin'ny fotoana maharitra.
Fahalemena eo amin'ny rafitra / rafitra
Ny endrika lehibe sy mandrahona indrindra dia ny marefo ara-drafitra / rafitra izay atahoran'ny rafitra ara-toekarena sy politika ary andrim-panjakan'ny filaminana eran-tany ny olona marefo, miaraka amin'ireo rafitra hanatanterahana ny politika hanatanterahana ny tanjon'ireo rafitra. (Ao aminy Fifandraisana Corona amin'ny COVID sy ny fiovan'ny toetrandro, Nanamafy i Ursula Oswald Spring fa ny fahazoana tombony no tanjon'izy ireo voalohany.) Indraindray antsoina hoe herisetra amin'ny rafitra, misy boky be dia be momba an'io hevitra io. Ny ankamaroan'ny mahantra dia teraka ao anatin'io fahalemen'ny firafitra / rafitra io, ary mijanona ho voafandrik'ireo rafitra ireo izay mametra ny fahafahany misoroka ny loza mety hitranga ary manangana faharetana; ny loharanom-bola kely rehetra ananany, nandany vola mba hahavelomana vetivety. Vao mainka aza nampidi-doza ny toe-javatra nisy azy ireo noho ny fanamafisana hafa ankehitriny noho ny fifindra-monina an-tery, sy ny famoretana ara-politika, indraindray hatramin'ny fanenjehana, ireo niharam-boina noho ny heloka sivily tsy nisy fanonerana ara-dalàna, satria iharan'ny fahantrana sy famoretana.
Fahasosorana fepetra / fitaovana
Rehefa "nandroso" ny sivilizasiôna olombelona, ​​ny sasany dia nahazo diplaoma tamin'ity loza mitatao tsy an-kijanona ity ho lasa tsy dia henjana sy maharitra marefo ny fepetra / fitaovana, izay ahafahana miroborobo ny filàna ara-nofo dia mety ho voafetra vokatry ny fepetra manokana, anisan'izany: ny ady, ny fahaketrahana ara-toekarena, ny fiovan'ny toetr'andro, ny tsy fahampian'ny fikarakarana ara-pahasalamana sy ny fanabeazana, ny tsy fananan'asa, ny korontana politika, ny fanavakavaham-bolon-koditra, ny fanavakavaham-bolon-koditra ary ny famindran-toerana. Ny fandrahonana ho an'ny fiarovana ny olombelona amin'ireo marefo amin'ny fepetra dia mazàna amin'ny alàlan'ny fanandramana hanafoana ireo antony mahatonga izany. Ny loza ateraky ny fahavelomana ao anatin'ity sehatry ny fahalemena ity, na dia voakasiky ny rafitra aza dia tsy rafitra voalohany. Ny risika dia mety hampihena ny vahaolana maharitra, ampiharina amin'ny alàlan'ny fanovana politika. Ireo marefo ireo, tsy ambany amin'ny tohatra tohatra toa ireo marefo ara-drafitra, no tena atahoran'ny mpandrafitra "fanarenana" ankehitriny: mpandraharaha orinasa kely; mpiasa karamaina voaroaka; ireo izay nihena na nihena ny fidiram-bolany noho ny aretina; ireo mikarama karama isan'ora, ary maro amin'ireo marefo ara-tsosialy, toy ny sembana, iharan'ny fanararaotana ao an-trano, ary ny "vitsy an'isa" voageja izay nahatonga azy io ho any amin'ny hantsana iray na roa ambony.
Fahalemena eo amin'ny toe-javatra / episodika
Ny olona eo amin'ny tohatra rehetra amin'ny tohatra dia mety hahita ny tenany amin'ny fanjakana fahalemen'ny toe-javatra / fizarana, ny endrika marefo izay voalaza hoe: “Miaraka manao an'io isika rehetra.”Amin'izao andron'ny quarantine izao, ny fanalavirana ny fiaraha-monina, ny sarontava sy ny fonon-tànana, ny rehetra, saingy ideolojika vitsivitsy amin'ny fandavana, dia mahalala fa tandindomin-doza izy ireo, mora voan'io virus mahafaty io. Ity haavon'ny fahalemena mahafaty ity dia vaovao amin'ny ankamaroan'ny manankarena (ny sasany amin'izy ireo dia nitsoaka nitsoaka ny trano faharoa na fahatelo), ho an'ny ankamaroan'ny antonony antonony, na dia ny sasany amin'ireo kilasy mpiasa aza; zaka ihany satria, na dia toa lava toa toa inona aza, noheverina ho toe-javatra miserana. “Hiara-hamita izany isika.” Ny tsy fandriam-pahalemana ankehitriny, ny tsy fahampiana, ny fahasahiranana ary ny tsy fahatokisana, vahiny amin'ireo manana fitaovana ampy, nefa mahazatra sy tsy miovaova amin'ireo rafitra sy ny maro amin'ireo marefo amin'ny fepetra, ho an'ny maro eo amin'ny zoro antonony sy avo kokoa, dia traikefa voalohany amin'ny fahalemena toy izany. Betsaka ny matahotra sao hianjera amin'ny toerana misy azy izy ireo, satria ny tahotra mora tohina dia mihena avy eo amin'ny tohatra mahazatra azy amin'ny tohatra; tahotra efa niorina tsara, nomena ny valin'ny fanampiana hatreto. Noho izany, ho an'ny sasany dia fifohazana izy io, farafaharatsiny mba misy fepetra raha mbola tsy marefo amin'ny firafitra. Ny famohazana ny zava-misy rehetra sy ny fepetra takiana amin'ny fandresena ny fahalemen'ny firafitra, raha tsy izany dia tsy mino aho fa azo atao ny manamboatra maharitra ireo endrika hafa, dia fanamby atrehin'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana ankehitriny.
Ny famohazana ny zava-misy rehetra sy ny takiana amin'ny fandresena ny fahalemen'ny rafitra, raha tsy izany dia tsy mino aho fa azo atao ny manasitrana maharitra ireo endrika hafa, dia fanamby atrehin'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana ankehitriny.
Ny areti-mifindra dia nanazava mazava tsara fa ny fizarazaran'ny fahantrana dia mety ho lehibe toy ny teo amin'ny tantara ihany. Saingy, mbola io fizarazaran-tena io dia mbola tsy voavaha amin'ny fomba rafitra. Ary koa, miaraka amin'ireo fepetra tsy voatanisa ao amin'ny Tanjona eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana maharitra, toa misy fanandramana fanombanana amin'ny ambaratonga sy ny toetran'ny fahalemena manerantany ve. Ny ankamaroan'ny valiny, hatreto, dia ny fahalemen'ny toe-javatra sy ny fepetra, tsy ampy tanteraka amin'ny filàn'ireo marefo ara-drafitra. Ity zava-misy ity dia naseho mazava tao amin'ny Corona Connection amin'ny fanararaotana ao an-trano, tranga iray izay voafandrika ao anatin'ny firafitry ny patriarka ireo marefo, ireo rafitra tsy resahan'ny iray amin'ireo endrika fanampiana atolotra. Ny fahalemen'ny firafitra dia tsy azo esorina amin'ny fomba natao hanarenana ny fahalemen'ny fepetra. Tsy misy, ary misy endrika azo adika tsara raha tsy misy tombana feno izay mifehy amin'ny sakany sy ny karazany marefo. Mba hanatanterahana izany filàna izany dia manome soso-kevitra aho ny fisandratana, manerana an'izao tontolo izao, ny endrika marefo rehetra ho fototra iorenan'ny fandinihana ny fitsikerana ny famolavolana fomba feno sy feno kokoa amin'ny fandaminana tontolo vaovao nohavaozina. Amin'ny sarintany toy izany dia mety hanomboka handray ny fanambin'ny andraikitsika amin'ny maha mpampanabe fandriampahalemana antsika amin'ny fanafoanana ny fahalemen'ny firafitra isika.
Ny ankamaroan'ny valiny, hatreto, dia ny fahalemen'ny toe-javatra sy ny fepetra, tsy ampy tanteraka amin'ny filàn'ireo marefo ara-drafitra.
Fanoritsoritana sarintany eran-tany momba ny fahalemena
Amin'ny tanjontsika ny fanaovana sary an-tsary ny sarintany manerantany momba ny fahalemena, dia nanitsy tantara vitsivitsy momba ny "Corona Connection" izahay, nanolotra fanoharana vitsivitsy momba ny fahasamihafana eo amin'ireo marefo, ny mampiavaka azy amin'ny endrika marefo, ary ny fomba itambaran'izy ireo matetika miaraka amin'ireo endrika hafa izay manana traikefa miaraka. . Avy any Afrika, tatitra nalefa teo aloha momba ny fandriam-pahalemana avy any Kamerona, COVID19: fanamby amin'ny fitandroana ny fandriam-pahalemana amin'ny tontolo ianjadian'ny fifandonanas mampiseho amintsika izany fiarahana izany izay ahitan'ny COVID tandindomin-doza ny ezaka hahazoana filaminana amin'ny faritra iray izay efa nanamafy ny fahalemen'ny firafitra sy ny fepetra ny fifanolanana mitam-piadiana. Tantara vaovao avy any India, Tao anatin'ny famoizam-po Lockdown, nifidy akondro ireo mpifindra monina tany akaikin'ny toerana fandoroana faty tao Delhi, mampiseho ny hamafin'ny tsy fahampian'ny fahazoana mivelona amin'ireo olona mora tohina ara-drafitra an-tapitrisany ao amin'io firenena io, ny tsy fahampiana iray izay nanahaka an'izao tontolo izao. Kaonty avy amin'ny rahavavy katolika, miasa amin'ny fahamendrehana misy fepetra, dia mampiseho ny fahalemen'ny fiarovana ny olombelona amin'ireo mpiasa marefo sy maha-olona mitady hanome azy ireo fitaovana sy loharanom-paharetana. Kaonty iray momba ny tsy fananan'asa avo lenta amin'ny fihenan'ny toekarena mipoitra avy amin'ny fanidiana dia ohatra iray amin'ny fahalemen'ny toe-javatra mafy orina izay mampanantena ny hampitombo ny laharan'ny fahalemena amin'ny fepetra. Ireo ohatra ireo dia mahatadidy ny Fifandraisana Corona avy amin'i Anita Yudkin, izay ahitantsika ny fananganana ny fanjanahan-tany manakana ny filaminan'ny olombelona any Puerto Rico izay niteraka fahalemena bebe kokoa tamin'ny fepetra taorian'ny rivodoza Maria, izay vao mainka niharatsy noho ny COVID. Ny fahalemena dia nohamafisin'ny valiny tsy ampy amin'ny mety ho ferana amin'ny tranga Maria sy COVID amin'ny fahalemen'ny toe-javatra. Ny fifandraisana avy any Amada Benavides tranga iray hafa, mitovy amin'ny an'i Cameroun, ny fampifangaroana ireo endrika telo rehetra ao anatin'ny fifanolanana mitam-piadiana any Kolombia. Ny fifanarahana fandriam-pahalemana izay nampanantena fa hampitsahatra ny taona maro amin'ny fahafatesan'ny olona sy ny rà mandriaka dia atahoran'ny COVID ankehitriny, ary ireo tena marefo indray no tena voa mafy.
Miaraka amin'ireo ohatra ny fahalemena ireo dia ny fiandohan'ny sarintany izay azon'ny mpampianatra mpanabe fandriam-pahalemana atrehana miaraka amin'ny fanadihadiana tranga misy sy ny endrika fahalemena rehetra amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Ny tanjoko dia ny sari-tany toy izany fa tsy hampiharihary ilay tranonkala mifandraika amin'ny fahalemena zakan'ny olona an-tapitrisany, fa afaka mamirapiratra fahazavana vaovao amin'ny fanekena bebe kokoa amin'ny fetran'ny rafitra ny vintana sy ny fahaizan'ny faharetana natsangana tao ambanin'ny vodin'izao tontolo izao. tohatra ara-tsosialy sy toekarena, ary ny tsy fandriam-pahalemana ataon'ny olombelona amin'ireo mifikitra am-piandohana amin'ireo zana-tohatra ireo.
Ny faran'ny Hammer
Rehefa navadiko ny fifantohan'ilay hazavana namirapiratra tamin'ny tranokalan'ny marefo ho amin'ny tohatra ara-tsosialy sy toekarena manerantany, dia tadidiko ny marotoa sy ny hoho nanamboarana azy. Mijery ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fananganana ambaratongam-pahefana ambony sy tsy fahampiana aho, ny hery miaramila an'ny lohan'ny marmara voalaza ao amin'ny “Ny olan'ny fantsika. ” Mieritreritra ny fizotry ny fanatanterahana sy ny fanafoanana izay resahintsika indraindray amin'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana miresaka ny fanovana toekarena sy ny tetezamita politika mankany amin'ny fandriampahalemana; fanesorana ny tsy fahamarinana ary ny fiezahana mankany amin'ny fitaovam-piadiana. Noho izany, notarihan'ny fahafahan'ny aingam-panahy avy amin'ny Ny hevitr'i Howard Richards momba ny fomba ahafahan'ny mpampianatra mandray anjara amin'ny fanovana ara-toekarena, ny fijeriko dia nifindra nankany amin'ny faran'ny faran'ilay tantanan'ny mpandrafitra, ny hombo. Hitako izao ny marotoa, ho fitaovana entina hanovana hamoahana ny hoho, hanaovana famerenana ireo singa ao amin'ilay tohatra. Ankehitriny, mitady ny hamolavola rafitra vaovao hampihenana ny fahalemen'ny fepetra amin'ny fizotran'ny famongorana ny fahalemen'ny rafitra - mandritra izany fotoana izany dia mahatadidy ny fahalemen'ny Tany mihitsy amin'ny fitrandrahana ireo rafitra ireo ihany - mihevitra aho fa toy ny:
Mety ho (tompon'andraikitra ara-tontolo iainana sy ara-toekarena) ve isika hamerina hametraka an'io ampahany io?
Inona avy ireo singa fanampiny mety ilaintsika mba hamoronana rafitra vaovao?
Iza no hiaraka aminay amin'ny fizotry ny famolavolana sy ny fananganana?
Ahoana no ahafahantsika mamolavola firafitra iray izay tena mety hitenenantsika hoe: “Miaraka isika rehetra ao?”
- Betty A. Reardon (4 Mey 2020)
# fiarovana ara-toekarena
UNESCO MGIEP dia manolotra taranja immersive & experiential momba ny Pandemics
Fampianarana literatiora momba ny fandriam-pahalemana amin'ny fitetezana tolona, ​​tsy fahazoana antoka ary krizy
Mijanòna! (ary misaintsaina). Taratasy avy amin'ny coronavirus.
Aprily 18, 2020 Vaovao sy hevi-dehibe 1
Rehefa mandavaka ambanin'ny eritreritsika sy fanao rehetra isika, ny fizotran'ny fandinihan-tena mihitsy dia lasa manan-danja kokoa amin'ny fomba fanasitranana ny tontolontsika marary. [tohizo ny famakiana…]
Tsy miverina intsony: inona no mety ho dikan'ny famerenana ny fanandramana nokleary amin'ny fomba vaovao?
Enga anie 30, 2020 fandaharam-pianarana 0
Ny fandrosoana rehetra sy ny fandrosoana natao mba hifehezana ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana niokleary, ary koa ny famongorana azy ireo, dia tandindomin-doza noho ny fiverenan'ny fitsapana nokleary. Ireo mpanabe fandriam-pahalemana dia tokony handinika akaiky an'io fanambarana io avy amin'ny fanafoanana 2000 raha te hahatratra ny fomba vaovao izay efa natombontsika.
Fampianarana mankany amin'ny fanafoanana ny nokleary: Herinandron'ny disarmament 2018
Oktobra 24, 2018 Vaovao sy hevi-dehibe 1
Nantsoina voalohany tamin'ny 1978 tao amin'ny Dokam-barotra Farany an'ny Session manokana voalohany an'ny ONU momba ny fitaovam-piadiana, ny Herinandron'ny fitaovam-piadiana dia manomboka amin'ny tsingerintaona nananganana ny ONU. Fotoana iray hananan'ny mpanabe fandriam-pahalemana hamahana ny olana sy ny mety hiseho eo amin'ny fiezahana mankany amin'ilay notondroin'i Elise Boulding ho "tontolo tsy misy fitaovam-piadiana". Amin'ny maha-fandraisana anjara amin'ny Global Campaign for Peace Education ho an'ny tanjon'ny herinandro dia manolotra fitaovana izahay hanombohana ny adihevitra momba ny fanafoanana ny fitaovam-piadiana niokleary, sy ny fandinihana ny fanoratana “tantara vaovao”. [tohizo ny famakiana…]